WORLD NEWS - Mckzone Daily
Social Stories, WORLD NEWS March 11, 2022
စာသင်ခန်းတစ်ခုထဲသို့ ဝင်ရောက်စူးစမ်းကာ ၎င်းကို သူ့ရဲ့ထာဝရနေအိမ်အဖြစ် ဖန်တီးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ကြောင်တစ်ကောင်
ကြောင်တစ်ကောင်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ ၎င်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာ သင် သိမှာပါ။ တူရကီနိုင်ငံမှ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Tombi အမည်ရှိအိုးမဲ့အိမ်မဲ့နီဝါရောင်ကြောင်တစ်ကောင်ဟာ တတိယတန်း စာသင်ခန်းတစ်ခုသို့ ဝင်ပြီး စူးစမ်းလှည့်လည်ကာ ထိုအတန်းရှိကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်အတူ နေထိုင်လာရင်း ထိုစာသင်ခန်းကို ၎င်းရဲ့ထာဝရအိမ်အဖြစ် ဆုံးဖြတ်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ Özlem Pınar Ivaşcu အမည်ရှိ၎င်းတတိယတန်းအတန်းပိုင်ဆရာမတစ်ဦးက အခန်းရှိကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးက Tombi ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားခဲ့သလို Tombi ကလည်း ထိုကလေးတွေကို နှစ်သက်နေခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ . သို့​ပေမဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးက…
Social Stories, WORLD NEWS February 12, 2022
အနက်ရောင်နောက်ခံပေါ်က ရောင်စုံစက္ကူပြားများဖြင့် ဖန်တီးထားတဲ့ ပန်းချီဆရာမတစ်ဦးရဲ့လက်ရာပြောင်မြောက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပန်းချီကားများ
ပန်းချီဆရာမ Yulia Brodskaya ဟာ paper quilling လို့ခေါ်တဲ့ ရာစုနှစ်များစွာ သက်တမ်းရှိ လက်မှုပညာတစ်မျိုး၏ နယ်နိမိတ်များကို ကျဲ့ကားပေးနေပါတယ်။ သူမ၏ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွင် ဝါသနာပါပြီး စည်းကမ်းပေါင်းစုံကို လေ့ကျင့်စေလိုသောဆန္ဒဖြင့်၊ သူမ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်လက်ရာများဟာ paper quilling ၏ အလှဆင်နည်းပညာများကို ခေတ်ပြိုင်ပုံစံဖြင့် အသုံးပြုထားပါတယ်။ Brodskayana ၏နောက်ဆုံးထွက်လက်ရာကတော့ လက်ရာပြောင်မြောက်တဲ့ အနက်ရောင်နောက်ခံနဲ့ ပုံတူပန်းချီကားချပ်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းပန်းချီကားများပေါ်က ရောင်စုံစက္ကူပြားများဟာ မှောင်မဲနေတဲ့မြေပြင်ကို တုန်ခါစေပြီး သူမကိုင်တွယ်သည့်…
Social Stories, WORLD NEWS December 28, 2021
အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ မွေးကင်းစကလေးငယ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကြောင့် အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကို လျင်မြန်စွာ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့
မကြာသေးမီက လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ မွေးကင်းစကလေးငယ်ရဲ့ ဓါတ်ပုံဟာ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ အများအပြားက ကလေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ရယ်မောဖွယ်အသွင်အပြင်များကြောင့် လူတိုင်းကို အဖျားတက်စေခဲ့ပါတယ် ။ မွေးကင်းစကလေးငယ်ဟာ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး ချစ်စရာလေးပင်ဖြစ်တာကြောင့် အဆိုပါ ဓာတ်ပုံဟာ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကို လျင်မြန်စွာ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ချစ်စရာနဲ့ စိတ်ခံစားမှုများ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မွေးကင်းစကလေးငယ်များရဲ့ ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ပြီး ရင်ထဲအေးချမ်းသွားစေမာအမှန်ပါ ။ ဒါပေမဲ့ ကလေးရဲ့သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းသော၊ အလွန်သိမ်မွေ့သောအသွင်အပြင်ကိုကြည့်တဲ့အခါ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့…
WORLD NEWS December 27, 2021
ညီဖြစ်သူရဲ့ရောဂါ ဆေးဝါးဖိုးစရိတ်အတွက် မိုးအေးအေးနဲ့ တံတားပေါ်မှာ တောင်းရမ်းနေခဲ့ကြတဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦး
ဘဝက ခက်ခဲနေတာကြောင့် အိမ်ခြေယာမဲ့ကလေးတွေ လမ်းပေါ်မှာ တောင်းရမ်းနေကြတာကို မြင်တွေ့ရတာက ပုံမှန်ပါပဲ။ ၎င်းတို့ကို ကူညီပေးချင်ပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့မှာလည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဆင်းရဲငတ်မွတ်နေကြရတာပါဘဲ။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခါတလေမှာ လူအများက ၎င်းအိမ်ခြေယာမဲ့ကလေးတွေရဲ့တကယ့် ဘဝအဖြစ်အပျက်ကိုမသိဘဲ ၎င်းတို့ကို လျစ်လျူရှုကာ ကျော်သွားတတ်ကြပါတယ်။ မကြာသေးမီက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ San Fernando Pampanga မြို့ရှိ တံတားတစ်ခုပေါ်သို့ ဖြတ်သန်းသွားနေခဲ့တဲ့ Pearl Jhene David အမည်ရှိအမျိုးသမီးအင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးဟာ တံတားပေါ်တက်မဲ့လှေကားထစ်မှာ တောင်းရမ်းနေတဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို…
WORLD NEWS December 22, 2021
မင်္ဂလာခန်းမထဲမှာ သတို့သားရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကြွက်သားတွေကြောင့် အခမ်းအနားအတွင်းသို့ လူများစွာ စုပြုံရောက်ရှိလာကြတဲ့အဖြစ်
မကြာသေးမီက အင်ဒိုနီးရှားမှ သတို့သားတစ်ဦးဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ အငွေ့အသက်တွေကို မျှဝေပြီးနောက် အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေကို အံ့အားသင့်စေတာကတော့ ဒီပွဲလေးမှာ သတို့သားက အဝတ်မဝတ်ထားဘဲ သူ့ရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ကြွက်သားတွေကို အတွဲလိုက် ပြသခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါဗီဒီယိုကို Tiktok အသုံးပြုသူ @farezafeb မှ တင်ထားခဲ့ပြီး ရှပ်အင်္ကျီကို ချွတ်က အခမ်းအနားထဲမှာ သတိုါသားက သူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေ ပြသထားတာကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် ။…
Social Stories, WORLD NEWS November 12, 2021
ငယ်ရွယ်စဉ်က ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးဆပ်နိုင်ရန် မွေးရပ်မြေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချကာ မိသားစုတိုင်းအတွက် ဇိမ်ခံတိုက်ခန်းများ အခမဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စီးပွါးရှင်တစ်ဦး
ရံဖန်ရံခါမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးရာကနေချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့ပုံပြင်တွေအကြောင်းကြားရတဲ့အခါ သန်းပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်လာတဲ့လူတွေဟာ သူတို့ဘယ်ကလာသည်ကို ဘဝမေ့သလိုမေ့သွားလောက်ပြီဟုသင်ထင်မိပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမဲ့ Xiong Shuihua အမည်ရှိဒီအမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ဇာတ်လမ်းမှာတော့မဟုတ်နေပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရှင်ဂျူးမြို့ Xiongkeng ကျေးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့တဲ့ Xiong ဟာ သူ့မိသားစုကို ဒေသခံတွေက သူတို့ရွာငယ်လေးမှာ ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပြီး ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံး သူတို့ကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်လို့ မမေ့မလျော့ဘဲ အမြဲပြောကာ စိတ်နှလုံးထဲမှတ်ထားနေခဲ့ပါတယ်။ Xiong ဟာ သံမဏိလုပ်ငန်းဖြင့် သန်းနဲ့ချီဝင်ငွေရလာတဲ့အချိန်မှာ သူဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားမယ့်အစား သူ့စည်းစိမ်ဥစ္စာများဖြင့် ၎င်းဒေသခံတွေကိုပြန်ပေးဆပ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို အခမဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။…
WORLD NEWS October 18, 2021
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလျှံနေပေမဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ရင်း လဲလျောင်းအနားယူနေခဲ့တဲ့ လူငယ် (ရုပ်သံ)
New Yorkers မှာ Ida (Ida) ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရစဉ် နေရာများစွာကို မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့ ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမှ မထိတ်လန့်တဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ ပုံကို ထိထိမိမိရိုက်ကူးထားပါတယ် ။ video clip ထဲက လူတစ်ယောက်ဟာ အားကစားဝတ်စုံနဲ့ စကပ်ဖိနပ်ဝတ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေသည့် ရေလွှမ်းနေသောလမ်းကြားမှာ ရာဘာလေကူရှင်ပေါ်တွင် လဲလျောင်းနေပြီး ဆေးလိပ်သောက်ကာ သူက လုံးဝမကြောက်ပုံ ရပါတယ် ။ ကလစ်ထဲမှာပါတဲ့ လူကဘယ်သူလဲဆိုတာကို…
WORLD NEWS July 7, 2021
လူတွေစွန့်ခွာထားရစ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလှပဆုံးသောနေရာများ
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့အဓိပ္ပါယ်မျိုး သက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ် ။လူတွေစွန့်ခွာထားရစ်ခဲ့လို့ အချို့သောနေရာတွေက ပုံပြင်စာအုပ်တွေထဲကလို လှပလွန်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်သလို ၊ အချို့နေရာတွေဟာတော့ ကြောက်မက်ဖွယ် အိမ်မက်ဆိုးပုံစံတွေနဲ့ ရှိနေခဲ့ကြပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း လူတွေစွန့်ခွာထားရစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း အလှပဆုံးသောနေရာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ရှိခဲ့တဲ့ နေရာလေးတွေကို စာဖတ်သူတို့အတွက်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ . . . . . . . . . . . . . Jasmine (Mckzone Daily)…
အပြင်လောကမှာ အမှန်တစ်ကယ်ကိုတည်ရှိနေတဲ့ ပဟေဠိဆန်လွန်းတဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့ အရိုးစုများ
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လွန်းတဲ့အရာတွေကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာမြင်ဖူးတွေ့ဖူးကြမှာပါ ။ အထူးသဖြင့် နဂါး နဲ့ ရေသူမ စတာတွေပေါ့ ။ သို့ပေမဲ့လည်း အဆိုပါ ပဟေဠိဆန်လွန်းတဲ့ သတ္တဝါတွေ အမှန်တကယ်တည်ရှိနေခဲ့တာကို သူတို့ရဲ့ကြွင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အရိုးစုကိုကြည့်ရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ် ။ လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ နေအိမ်တစ်ခုမှာတော့ အဆိုပါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်းတဲ့အရိုးစုတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ် ။ ကိုယ်တွေ သာမှန်အတိုင်းတွေးထင်ထားလို့မရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အရိုးစုပေါင်း 5000 ကျော်ခန့်ကို ခင်းကျင်းပြသထားတာပါ ။ အဆိုပါအရိုးစုတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူမှာ Thomas Merrylin အမည်ရှိတဲ့ အမျိုးသားဖြစ်ပြီး ၊…
WORLD NEWS July 6, 2021
မြစ်ချောင်းတွေ နဲ့ ရေကန်ကြီးတွေထဲမှာ ရွှေငါးတွေကို လုံးဝမလွတ်ပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
လူအတော်များများကတော့ ရွှေငါးတွေကို မွေးဖူးကြမှာပါ ။ ဒါပေမဲ့ ငါးလေးတွေ ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာ အနောက်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကတော့ နမော်နမဲ့ ရေအိမ်အတွင်းထဲသာ ပစ်လေ့ရှိကြပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း တစ်ခါတစ်လေ အဆိုပါရွှေငါးတွေက မသေဘဲ ရေစီးကြောင်းအတိုင်း မြစ်ချောင်း ၊ အင်းအိုင် နဲ့ ရေကန်ကြီးတွေထဲ ကျရောက်သွားပြီး အသက်ဆက်ရှင်သန်နေကြပါတယ် ။ ရွှေငါးတွေက မွေးမြူဖို့ ငွေပမာဏမများလို့ လူအတော်အများက နေအိမ်အတွင်း အလှဆင်ရန်အတွက် မွေးမြူလေ့ရှိကြပါတယ် ။သို့ပေမဲ့လည်း ၎င်းတို့နဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ နေရာတွေမှာ…